Tirada Shaqaalaha dowlada ee ku dhintay weerarkii Zoobe oo la shaaciyay | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Tirada Shaqaalaha dowlada ee ku dhintay weerarkii Zoobe oo la shaaciyay
Tirada Shaqaalaha dowlada ee ku dhintay weerarkii Zoobe oo la shaaciyay
Kulan ay isugu yimaadeen Xiriirka guud ee Shaqaalaha Dowladda, ayaa lagu soo bandhigay tirada shaqaalaha Dowladda ee ku geeriyooday kuna dhaawacmay masiibadii ka dhacday Magaaladda Muqdisho iyo kaaalinta ay ka qaateen Xiriirka Guud ee Shaqaalaha Dowladda.
Kulanka ayaa lagu sheegay in Shaqaalaha Dowadda ee ku dhintay Qaraxii Zoobe uu yahay Lix qof, halka ay ku dhaawacmeen 20 qof sida ay sheegeen Xiriirka guud ee Shaqaalaha Dowladda Soomaaliya.
Xoghayaha Xiriirka Goboladda Maamul goboleedyada ee Xiriirka guud ee Shaqaalaha Dowladda Maxamed Macallin Iimaan, ayaa waxaa uu tilmaamay kaalintii ay ka qaateen gurmadkii loo fidinayey dadkii waxyeelada ay soo gaartay dhacdadii KM5.
Guddoomiye Ku xiggeenka Xiriirka guud ee Shaqaalaha Dowladda Nuur Axmed Diiriye oo ka hadlay kulanka, ayaa tacsi u diray dhamaan Shacabka Soomaaliyedd, isagoo ku dhaawacyada culus uu soo gaaray Alle uga baryey in Caafimaad deg deg ah uu siiyo.
Guddoomiyaha Xiriirka guud ee Shaqaalaha Dowladda C/risaaq Macaallin Cilmi, ayaa waxaa uu faahfaahin ka bixiyey kaalintii ay ka qaateen gurmadka loo fidinaayey Shacabkii ku waxyeeloobay Musiibaddii ka dhacay Zoobe.
Previous articleMadaxwayne Farmaajo oo dhambaal tacsiyo ah ka helay Madaxwaynayaasha Jabuuti Uganda iyo Boqorka Urdun
Next articleDhaawacyo loo qaaday dalka Suudaan